China fekitori Kupa Yakakwira yepamusoro Tatu Row Roller Slewing Kubereka fekitori uye vagadziri | Wanda
Fekitori Kupa Yakakwira Yakakwira Yakatatu Row Roller Slewing Kubereka
Mitsara mitatu roller yekucheka mabhegi anoshandiswa zvakanyanya pane anorema-basa michina iyo inoda yakakura yekushanda nharaunda.
Mutsara wechitatu wekutenderera mhete yekutakura ine matatu ekugara-mhete, ayo anoparadzanisa epamusoro, ezasi uye eredhiyo mugwagwa, kuburikidza neuyo mutoro wetsetse wega wematanha anogona kutsanangurwa. Nekudaro inogona kutakura mutoro wakasiyana panguva imwe chete uye huremu hwayo mutoro ndiyo hombe yemhando ina.
Katatu mutsetse chinotenderera slewing inobereka ine matatu akasiyana mhando:
Katatu mutsara mutsara wekucheka mabhegi ane anotevera maficha
Huru axial uye TOUR divi, chiumbwe mamiriro
mitsara mitatu irikutakura mabheyaringi anoshandiswa zvakanyanya pane anorema-mushini michina inoda hukuru hwekushanda nharaunda, senge mabhaketi emabhaketi, mavhiri emakirosi, makira engarava, ladle turret, auto cranes nezvimwe.
Zvakabatanidzwa ndiyo katarogu yetatu mutsetse chinotenderera slewing kubereka, unogona kusarudza yakakodzera slewing kubereka maererano nezvaunoda.
Pashure: Yakakwira mhando 4 poindi yekubata bhora turntable inobereka yemhepo turbines
Zvadaro: 4 poindi angular kuonana bhora turntable slewing mhete
slewing mhete mabheyaringi
matatu mitsara chinotenderera slewing mabheyaringi
matatu musara chinotenderera slewing kubereka